Maxaa fududeeyay guusha Muuse Biixi? - BBC News Somali
Faarax Lamaane BBC,Hargeysa
21 Nofembar 2017
Inkastoo uu guddiga doorashadu 8 maalmood codbixinta ka dib ku dhawaaqay in Muuse Biixi uu ku guulaystay, misna saadaal badan ayaa dhankaas u janjeertay; kaliya waxaa laga dhawrsanayey in afka la soo mariyo bacdamaa aan natiijo rasmi ah lagu dhawaaqin. Haddaba maxaa guushiisa fududeeyey?
Gogol ayuu u dhigtay isagoo xaal ka dalbaday maadaama aysan labada murashaxba beesha ka tirsanayn, wuxuuna ku saleeyey eeddiisa in isaga laga hiilliyey oo sabab la'aan lagu dhagaxyeeyey.
Markii la ogolaaday in la xaal mariyo ayuu yiri "waad mahadsan tihiin lacagna idinkagama baahni laakin igu xaal mariya codkiina oo isaga I siiya" waxaa la aaminsan yahay in beeshaas u codad aad u badan sidaa uga helay. Isla xagga dhaqanka oo siyaasadda Somaliland ay ku qotontana waxaa abtiyaal u ah beesha uu ka soo jeedo murashaxa mucaaradka.
Image caption Guddiga doorashada Somaliland ayaa maanta ku dhawaaqay natiijada doorashadii dhacday 13-kii bishan
Dabeecad ahaan waa nin furfuran oo dadka yaqaanna ay ku tilmaameen in uu yahay nin la fahmi karo, waxna fahmi kara. Waxay kaloo ku tilmaameen inuu yahay nin go'aan adag oo aan ka laaban waxa u go'aansado. Taasi waxay keentay in uu isagu toos maamusho ololihiisa.